Ingqungquthela Yesimo Sezulu seBonn 2017 (COP23) iphela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Le Ngqungquthela Yesimo Sezulu engamashumi amabili nantathu (COP23) isivele iphelile, futhi ikwenza lokho ngemvume yemibhalo eqala ukucacisa imithetho yeSivumelwano SaseParis sokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Lesi Sivumelwano sinamazwe acishe abe ngama-200 aseke aqinisekisa ukuzibophezela kwabo eBonn ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu yize i-United States isukile.
Lesi Sivumelwano sibaluleke kakhulu ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu futhi manje kunanini ngaphambili, ngoba, ngemuva kokuhamba kwe-United States, elinye lamazwe angcolisa kakhulu emhlabeni, kufanele kwenziwe umzamo omkhulu wokungafezekisi ukwanda okungu-2 ° C amazinga okushisa aphakathi komhlaba. Yimiphi imithetho esunguliwe kulesi Sivumelwano SaseParis?
1 I-COP23 iyaphela
2 Izici zombhalo
3 Izimali zeTalanoa nezingxoxo
UNdunankulu waseFiji, uFrank Bainimarama, owayephethe isikhundla sokuba ngumongameli we-COP23, wabona ukuthi umbhalo ovunyelwe kule ngqungquthela, wabiza "Isikhathi Sokuqalisa Senkomo" weSivumelwano SaseParis, esenza kudume igama elithi "inkunzi" lapho abantu baseFiji babingelelana khona, "kuyisinyathelo sokuqhubekela phambili ekusetshenzisweni kwesivumelwano esifinyelelwe ngonyaka we-2015."
Yize ezinye izingxoxo sezifinyelelwe futhi lesi Sivumelwano sakhiwa, kusenomsebenzi omkhulu okusamele wenziwe. IKhomishani yaseYurophu Yezenzo Zesimo Sezulu, UMiguel Arias Cañete, ibonile ukuthi silindelwe unyaka onzima wokuhlangana kwemihlangano yezokuxhumana kwesimo sezulu. Kusenezinto eziningi ezisazolungiswa futhi zibhekelwe intuthuko yezomnotho esimeme ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu.
Lo mbhalo uqukethe ukubuyekezwa kokuzibophezela kukazwelonke okuningi ukuncishiswa kwamagesi abamba ukushisa kanye nokuxhaswa ngezimali amazwe acebile azokwabela lawo asathuthukayo ukuze akwazi ukuzivumelanisa nokuguquka kwesimo sezulu.
Umbuzo wezezimali, ikakhulukazi, ukubambezele ukwamukelwa kwesivumelwano kuze kuse, ngenkathi amazwe asathuthuka efuna ukuthi abacebile babike eminyakeni emibili ngaphambili ukuthi bazonikela malini futhi ngamiphi imigomo, ngenhloso ukuthi bakwazi ukuthi banaziphi izimali.
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-United States isiphumile Esivumelwaneni saseParis, yize lokhu kuphuma Ngeke ivele kuze kube ngu-2020. Kodwa-ke, isimemezelo sokuhoxa kwaleli lizwe kudale isimo sokungathembani okujwayelekile emazweni asathuthuka asecindezele amanye amazwe acebe kakhulu ukuthi aqhubeke nokuzinikela ekuvikeleni imali.
Siyakhumbula ukuthi namuhla intuthuko yezomnotho iyefana nokungcolisa. Lokho kusho ukuthi, i-GDP yezwe ihlobene kakhulu nokukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa, ngakho-ke amazwe asathuthuka, uma efuna ukuyeka ukukhipha amagesi, bazodinga imali ukuze uqhubeke nokukhula kwezomnotho.
Izimali zeTalanoa nezingxoxo
Amazwe asathuthuka afinyelelwe Isikhwama Sokuguquguquka Kwesivumelwano seKyoto hlala Esivumelwaneni saseParis. Ngaphezu kwalokho, kunesibopho esikhomba ukuthi amazwe acebe kakhulu kuzodingeka wethule umbiko ocacile futhi onemininingwane wokuthi bazonikela malini kuze kube unyaka we-2020, okuyilapho isivumelwano saseParis sisebenza, okokuqala ngqa esinezibopho zawo wonke umuntu.
Ngamafuphi, amazwe asathuthuka afuna ukuqinisekisa ukuthi labo ababhekele kakhulu ukuguquka kwesimo sezulu bafeze ukuzibophezela kwabo esigabeni sesibili se-Kyoto Protocol, kuze kube ngu-2020, ukuze baqale ukuzenzela okwabo kusukela ngalolo suku nangeSivumelwano SaseParis.
Kule COP23, idizayini ebizwa ngokuthi yiTalanoa Dialogue yaklanywa. Lokhu kuqukethe ukuziphendulela engqungqutheleni elandelayo lapho amazwe kuzodingeka achaze ukuthi bazokwengeza kanjani izifiso zabo kanye nokuzibophezela kwabo ekunciphiseni ukungcola ukuze bafeze umgomo okuvunyelwene ngawo wokwehlisa amazinga okushisa omhlaba.
Ingxoxo ye-Talanoa ngeke ihlanganise kuphela ohulumeni, abasebenzela izinhlangano zomphakathi (izinkampani, izinyunyana, abezemvelo, ososayensi, njll.) Nabo bazobakhona, futhi amazwe acebile kuzodingeka anikeze i-akhawunti ukuthi bazokwenzani ngaphambi konyaka wezi-2020 ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu.
Ekugcineni, kukhunjulwe ukuthi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ayifani kuwo wonke umuntu, kodwa akekho noyedwa ophunyukayo kuyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » IBonn Climate Summit 2017 iyaphela (COP23)